Amakepisi wamaloli nama-baseball amadoda nabesifazane - THE INDIAN FACE
Iqoqo - Ofeleba
I-Northern White emnyama neblue
Born to Snowboard Okuluhlaza okotshani nokubomvu
Born to be Free Mhlophe / Mpinki / Mnyama
Born to Ultratrail Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to be Free Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to Surf Okuluhlaza / Okuphuzi / Okumhlophe
Born to be Free Okuluhlaza / Okuphuzi / Okumhlophe
Born to Sail Mhlophe / Mnyama
Born to Skate Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to Run Mhlophe / Luhlaza
Born to Surf Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to Snowboard Mhlophe / Mpinki / Mnyama
Born to Run Luhlaza / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to Run Mhlophe / Mpinki / Mnyama
I-Blue and White Santa Cruz Cap
Precio de deerta1495 € 14.95 € Isiqalo se-Precio 4000 € 40.00 € Wonga u-€25.05
Ihlengethwa Grey / Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka
I-Barefoot Red / Grey
I-Barefoot Brown / Luhlaza okwesibhakabhaka
I-Barefoot Grey / Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka
UDeer Brown / Okuluhlaza okwesibhakabhaka
Ufudu Oluluhlaza okwesibhakabhaka Oluhlaza
I-TRUCKER BASEBALL CAPS YAMADODA NABESIFAZANE
La cap Ingesinye sezesekeli ezisetshenziswa kakhulu ngumsubathi wanamuhla. Namuhla, amakepisi ayingxenye yezingubo zemisebenzi eminingi nabasubathi, ngakho-ke kunezinhlobo eziningi zamakepisi ngokuya ngemisebenzi oyenza nsuku zonke. Ngokunokwenzeka, lokhu kuncike ekutheni ugqoka ikepisi lamaloli, ikepisi lomfana, ikepisi elincane, ikepisi lomfana, ikepisi elimnyama, ikepisi elimhlophe, ikepisi lemeshi, ikepisi elibomvu, ikepisi yokudweba, noma ikepisi lezemidlalo. nganoma yisiphi isitayela noma umbala ongacabanga .. Ngama-caps izwe elinamathuba angenamkhawulo liyavuleka!
Ngale ndlela, abantu abaningi, abaningi emhlabeni wonke bayayisebenzisa izigqoko zenkambiso nsuku zonke. Eqinisweni, ikepisi ingenye yezesekeli ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni, ngoba ayinabo ubulili noma umehluko wobudala. Kodwa-ke, kuyiqiniso ukuthi amakepisi ezemidlalo angamakepisi asetshenziswa kakhulu ukuba lusizo nokunethezeka kwawo. Kulokhu, akunandaba uma ufaka ikepisi eligijimayo, ikepisi lokuhamba ngebhayisikili noma enye yezindwangu ze-baseball ezisenganekwaneni, futhi akunandaba ukuthi ugqoka ikepisi lomfana, ikepisi lentombazane, noma uma ufaka ikepisi lomfana, okubalulekile into ukuthi, uma ungumthandi wezemidlalo futhi uhola indlela yokuphila esebenzayo, kunezinhlobo eziningi zamakepisi ezingasiza ukufeza yonke imisebenzi yakho yansuku zonke.
Ngokomlando, izigqoko zebhola izibeke njengenye ye- izigqoko yakudala kakhulu futhi iyisithonjana emhlabeni. Ngokukhethekile, amakepisi e-baseball aqala cishe ngonyaka we-1860, lapho kwavela ikepisi elibizwa ngokuthi "isitayela saseBrooklyn. Le cap ingukhokho wama-baseball caps, njengoba kuze kwaba ngo-1940 lapho ukwakheka kwalungiswa ukuze kwakheke ama-baseball caps esiwaziyo namuhla. Ngaleso sikhathi, i-visor ye-cap yayenzelwe ukuvikela amehlo womdlali, futhi kusukela lapho kuqhutshelwa izigqoko ze-baseball ukuthuthukisa ikhwalithi yazo nokwenza lawa makepisi abe wusizo kwezemidlalo.
Okunye ukuguquguquka okungokomlando ikepisi ebinakho yi iloli lamaloli, eyaziwa nangokuthi ikepisi yegridi noma ikepisi lamaloli. Isigqoko seloli iloli luhlobo olukhethekile nolukhanga kakhulu, olusetshenziswa ngabasubathi abaningi, abafikayo kanye abayimilutha yasemadolobheni abangavumelani abavela kuwo wonke umhlaba, abangabalandeli bokugqoka izigqoko ezenziwe ngokwezifiso nomaphi lapho beya khona Into ethokozisayo ngalawa ma-cap ukuthi bagqama ngokuba imodeli yekepisi lokudweba noma i-logo cap. Lokhu kusho ukuthi zingama-caps afanele ukukhombisa ngaphambili ukwakheka noma i-logo echaza umuntu ofake ikepisi elishiwoyo, noma ngabe ikepisi elibomvu, noma ikepisi elimnyama, ikepisi elimhlophe, noma ikepisi lanoma yimuphi omunye umbala . Luhlobo lwesigqoko semesh esenziwe ngokuphelele ngendwangu njengoba, ngokwesibonelo, ikepisi le-baseball lakudala. Eqinisweni, i-mesh cap ingumehluko omkhulu kunayo yonke lapho ikepisi yeloli eliqhathanise ne ikepisi le-baseball. Kulokhu akubalulekile ukuthi uyi- ingane cap, eyodwa ikepisi lentombazane noma a ikepisi lomfana, ngoba le modeli yamakepisi ayinabo ubulili noma umehluko wobudala noma. Impela ikepisi yamaloli iyimodeli yezinhlamvu eguquguquka kakhulu ewela ezigabeni eziningi: izigqoko zezemidlalo, izigqoko zemfashini namakepisi wangokwezifiso, ngoba ingenye yalezo zinhlobo zekhanda.
En The Indian Face Ungathola amakepisi wetrucker, amakepisi wemfashini, amakepisi wokugijima namakepisi okuhamba ngebhayisikili, nezinye izinhlobo eziningi zamakepisi. Uma ufuna ukuthenga amakepisi enziwe waba ngewakho, iwebhusayithi yethu iyindawo ekahle yokukhetha okuthandayo futhi uthenge amakepisi online. Uzothola zonke izinhlobo zokudweba izigqoko ezinezifanekiselo eziningi ezihlobene nemidlalo oyithandayo eyedlulele njengokusebenzisa amakepisi namakepisi okuhamba ngebhayisikili. Into ejwayeleke kakhulu futhi enengqondo kunazo zonke ukuthi uhlobo ngalunye lwezinhlayiya lusetshenziswa ngokomsebenzi esizowenza.
Isigqoko sakho sichaza ukuthi ungubani kanye nomlingiswa ophethe ngaphakathi. Ku- The Indian Face Sifuna ukudala izinhlobo ezinhle kakhulu zama-caps futhi izigqoko zezemidlalo ezinhle kakhulu ezimakethe, ngokwesibonelo ikepisi lokuhamba ngebhayisikili nekepisi eligijimayo, ngenhloso yokunikeza amakhasimende ethu ithuba lokuthenga amakepisi online ngokunethezeka.
En The Indian Face minyaka yonke sivuselela ukuqoqwa kwethu kwe- izigqoko zemidlalo ukunikela ngekhwalithi engcono kakhulu enezinketho ezahlukahlukene. Izinhlobo zethu zamakepisi zinengaphambili likakotini nemesh emuva, nokuvalwa kwe-snapback okuguquguqukayo. Uzobona ukuthi amakepisi wethu wemfashini ayinto yakudala ephefumulelwe ama-80s nama-90s! Sifaka, isibonelo, ikepisi eligijimayo nekepisi lokuhamba ngebhayisikili, nekepisi elibomvu nekepisi elimnyama, ngaphandle kokushiya ikepisi elimhlophe noma ikepisi lokudweba, kodwa ngeke kube noma yimuphi umdwebo, kuzoba isithombe esimele yomdlalo owazalelwa ukuwenza. Asimane simane sidayise amakepisi o-mesh…. Amaloli wethu afaka imidlalo emsulwa futhi enzima ngesitayela esihle kakhulu.
NAWE, YIMIPHI IMIDLALO OZALELWA?
Sinikeza izigqoko okuqhamuka nezinto ezintsha kakhulu kuqhathaniswa neminye imakethe, hhayi kuphela ikhwalithi, induduzo kanye nesitayela esinikezwa amakepisi ethu ezemidlalo. Sigxile ekuvuseni umoya wokuzikhandla, ukuzibandakanya ohlotsheni ngalunye lwekhephu ukudweba ibheji elihlobene nomdlalo owuthandayo futhi okusenza sizizwe sikhululeke ngempela. Amakepisi ethu awawona amakepisi alula ... ikepisi lethu lezinkanyezi, ikepisi lamaloli, kuwukubonakaliswa komsubathi owugqokayo.
Ngakho-ke, siyakwazi ukudlulisa umuzwa wezemidlalo ezingubeni zethu zamantombazane, izigqoko zabafana nezigqoko zabafana. Okuhle kakhulu, kokuhamba phambili: amakepisi enziwe ngezifiso nomdlalo okukhuthaza ukuthi uphile ngokuthanda.
Ingabe ungumthandi wezemidlalo futhi uyathanda ukugqoka amakepisi asemfashinini?
Esitolo sethu se-caps esiku-inthanethi ungathola inketho ekahle futhi uthenge ngendlela entofontofo, elula nephephile. Enye yezinzuzo ezinkulu kakhulu zekhanda lamaloli, yethu ikepisi lezemidlalo okuthengwa kakhulu, ukunethezeka nokusebenziseka kalula komklamo, isitayela nezinto zokwakha. Sithe ukwakheka kwama-trucker caps kutholwe kusigqoko se-baseball esijwayelekile, ngokunye ukulungiswa okuwenza ube ngomunye wamakepisi wemfashini athandwa kakhulu namuhla. Ama-visors kulezi zinhlobo zamakepisi agobile, yize kunezinhlobo ezithile zezingubo zemidlalo ezinesitayela samaloli ezinama-visor flat. Futhi, izigqoko zamaloli zifika ngemibala eminingi emihle. Kule modeli yesembozo semesh kukhona ikepisi elibomvu, ikepisi elimnyama nekepisi elimhlophe, konke kwenziwa ngezinto ezilula.
Amakepisi ethu wamaloli anezinzuzo eziningi ngaphezu kwazo zonke ezinye izinhlobo zama-caps online akhona. Ingabe nawe unesibindi sokugqoka ikepisi lezemidlalo? The Indian Face, futhi ubukeka unemfashini unyaka wonke? Vakashela i- caps esitolo online bese ukhetha ikepisi lentombazane, ikepisi lomfana noma ikepisi lomfana olikhethayo!